arakaraka ny zavatra niainany sy nosedrainy avy. Raha ho an’ny firenena sy ny fiainana ankampobeny kosa, dia ratsiratsy ihany tamin’ny ankampobeny. Nahazo mpitondra vaovao izay tena nampanantena an’I Madagasikara ho lasa paradisa kely isika. Saika re isaky ny mivoaka ny vavan’ilay filoha, fa tena hamiratra ny ho avin’ilay Madagasikara. Indrisy anefa, fa toa mijanona ho kobaka am-bava ny ankamaroany. Tsy miova ilay fomba nentina nambaboana antsika 10 taona lasa izay, ka raha mba efa tany amin’ny fandrosoana ilan-tongotr’I Madagasikara, dia nihemotra tany aorian’ny fiaingana. Hatreto mbola tsy mahadingana ny dingana efa vita tamin’izany. Tsy arakaraka ilay noresahina fa hovitaina 5 taona ny tsy vitan’ny teo aloha nandritra ny 58 taona. Indrisy fa ny fahasimbana sy ny fahantrana tsy hita 58 taona aloha no tena jinjaina izao. Tsy tena voaavaka eto ny hoe inona no maika sy mahasoa sy ny hoe inona no mahafinaritra. Nihemotra isika na ara-toerana na ara-demokrasia! Tsara haingo sy miravaka ny tanàna! Tena tsara sy manintona, fa ilay vahoaka miaina ao anatin’ireny ve tena mbola mihinan-kanina in-telo isan’andro? Ilay tra-boina any Avaratra-Atsinanan’ny Nosy ve mba misy mamonjy sy mijery sa ny hifety be any Lafrantsa no ambony? Tsy sanatria fitia te hitsikera fa tsy arakaraka ny vava be natao ny asa. Tsy arakaraka ny famotehana efa vita ny zavatra atao. Irariana mba hiara-hivalona amin’ity taona ity balarora, ka ny fanatanterahana no tena himasoana amin’io taona ho avy io. Ny tànana efa zatra mitsotra anefa, hono, tsy afaka ny hivokona intsony, kanefa ny hamisavisana ny ratsy tokoa mba hiavian’ny soa e!